कसरी एउटा फेसबुक खाता मेटाउने मोबाइल फोरम
यदि तपाइँ सोच्नुहुन्छ भने समय आयो तपाईंको फेसबुक खाता मेटाउनुहोस्, या त किनभने तपाईं यो प्लेटफर्मको उपयोग गर्न बन्द गर्नुभयो, तपाईं मार्क जुकरबर्गको लागि डाटाको स्रोत हुन जारी राख्न चाहानुहुन्न वा तपाईं कसरी यति धेरै पटक देख्न थाल्नुभयो, नयाँ सुरक्षा घोटाला कम्पनीको लागि कुनै परिणाम बिना खुला हुन्छ, यस लेखमा तपाईंलाई पछ्याउने चरणहरू देखाउँदै छ।
फेसबुक खाता बन्द गर्न एक अपूरणीय प्रेरणा द्वारा प्रेरित हुन सक्छ कि हामीलाई यसको साँचो अर्थ के हो भन्नेमा आश्चर्य छैन। यस प्लेटफर्ममा खाता बन्द गर्नु भनेको यसको मतलब हो हामीले प्रकाशित गरेका सबै छवि, भिडियो र जानकारी गुमाउनुहोस् यस सामाजिक नेटवर्कमा, जबसम्म हामीले अघिल्लो ब्याकअप गरेका छैनौं।
तपाइँको फेसबुक खातालाई अस्थायी रूपमा हटाउन वा निस्क्रिय गर्न अगाडि जानु भन्दा अघि, तपाईले अन्य लेखहरूमा हेर्नु चाहानुहुन्छ जहाँ हामी तपाईंलाई कसरी देखाउँदछौं। फेसबुक भिडियो डाउनलोड गर्नुहोस्, कसरी फेसबुक मा एक अवतार सिर्जना गर्न, कसरी थाहा पाउने जो हाम्रो प्रोफाइल भ्रमण गर्दछ, यदि तिनीहरूले तपाईंलाई ब्लक गरेका छन् वा कारण र समाधानहरू कहिले फेसबुकले काम गर्दैन.
1 खाता खोल्नुहोस् बनाम फेसबुक खाता मेटाउनुहोस्
2 फेसबुकमा प्रकाशित सबै सामग्री कसरी डाउनलोड गर्ने
3 कसरी फेसबुक खाता निस्क्रिय गर्ने
4 एक निष्क्रिय फेसबुक खाता कसरी पुन: सक्रिय गर्ने
5 कसरी फेसबुक खाता मेटाउने
6 मेटाईएको फेसबुक खाता कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
खाता खोल्नुहोस् बनाम फेसबुक खाता मेटाउनुहोस्
हामीले हाम्रो फेसबुक खाता रद्द गर्ने प्रक्रियाको बारेमा हामीले थाहा पाउनु पर्ने पहिलो कुरा कम्पनी हो हामीलाई दुई विकल्प प्रदान गर्दछ:
खाता निष्क्रिय गर्नुहोस्
फेसबुक खाता निष्क्रिय गर्नुहोस् यसको मतलब सामाजिक नेटवर्क अदृश्य पार्नु हो, ताकि कोहीले पनि हामीलाई खोज्न, हाम्रो जीवनी हेर्न, सन्देशहरू पठाउन सक्षम हुने छैन ... यो प्रक्रियाले हामीलाई प्लेटफर्ममा हाम्रो गतिविधि पुनः सुरु गर्न अनुमति दिन्छ जब हामी चाहन्छौं, जब हामी फिर्ता गर्न तयार महसुस गर्दछौं। यसमा, यसलाई हाम्रो डिस्पोजेसनमा फेरि राख्दै, र सबै प्रयोगकर्ताहरूको, डाटा हामीसँग थियो हामीले खाता निष्क्रिय नगरेसम्म।
खाता निष्क्रिय भए पनि, हाम्रा साथीहरूले घटनाहरूमा आमन्त्रित पठाउन जारी राख्न सक्छन्, हामीलाई फोटोहरूमा ट्याग गर्न वा समूहहरूमा आमन्त्रित गर्नुहोस्।
फेसबुक खाता मेटाउनुहोस् त्यो प्लेटफर्ममा पूर्ण रूपमा अलविदा भन्नु हो। यो प्रक्रिया, खाता निस्क्रिय पार्ने विपरित, अपरिवर्तनीय छ, कि हामीसँग हामीले प्रकाशित गरेको सबै सामग्रीको साथ प्लेटफर्ममा फर्कने विकल्प हुँदैन। फेसबुक हामीलाई १ mind दिन दिईन्छ आफ्नो दिमाग बदल्न र तपाईंको खाता फिर्ता लिन।
केवल जानकारी जुन फेसबुकबाट मेटाइएको छैन त्यो कुराकानीहरू हुन् जुन हामीले अन्य व्यक्तिको साथ गर्न सक्दछौं, किनकि यी हाम्रो कुराकानीको कुराकानीमा राखिनेछ। अधिकतम अवधि जसमा फेसबुकले ग्यारेन्टी गर्दछ कि यसले हाम्रो सबै डाटा मेटाउँछ 90 दिन।
फेसबुकमा प्रकाशित सबै सामग्री कसरी डाउनलोड गर्ने
अघि बढ्नु अघि हाम्रो फेसबुक खाता मेट्नुहोस्हामीले गर्नै पर्ने पहिलो कुरा यो सामाजिक नेटवर्कमा हामीले प्रकाशित गरेको सबै सामग्रीको एक ब्याकअप हो, छवि र भिडियोहरू र प्रकाशन दुबै।
तपाईं एक बाट तल फिर्ता पहिले प्रक्रिया जुन लामो र धेरै कठिन हुन सक्छतपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि फेसबुकले हामीलाई एउटा उपकरण प्रदान गर्दछ जसले हामीलाई यो पूर्ण प्रक्रिया स्वचालित रूपमा गर्न अनुमति दिन्छ।
Para जगेडा फेसबुक, हामीले तलका चरणहरूको अनुसरण गर्नुपर्छः
सबै भन्दा पहिले हाम्रो ब्राउजर मार्फत फेसबुक पृष्ठ पहुँच र विकल्पहरूको पहुँच गर्न हो सेटअप र गोपनीयता - सेटिंग.
कन्फिगरेसन भित्र, क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको फेसबुक जानकारी.
दायाँ स्तम्भमा, क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस्.
अर्को स्क्रिनमा, हामीले चयन गर्नुपर्दछ:
मिति दायरा: मेरो सबै डाटा
मल्टिमेडिया सामग्रीको गुणस्तर: उच्च
अर्को, हामीले हाम्रो खाताको जानकारीको सबै बक्सहरू (प्रकाशन, फोटो र भिडियोहरू, टिप्पणीहरू, साथीहरू ...) पुष्टि गर्नुपर्नेछ। चिह्नित छन्। यदि त्यहाँ कुनै जानकारी छ जुन हामी राख्न चाहँदैनौं, हामी सम्बन्धित बाकस अनचेक गर्न सक्दछौं।
अन्तमा, हामी क्लिक गर्दछौं फाईल सिर्जना गर्नुहोस्.
त्यस समयमा, हामी एक ईमेल सन्देश प्राप्त गर्नेछौं प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित खातामा जहाँ तपाईं हाम्रो जानकारीको प्रतिलिपि अनुरोध गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
जब ब्याकअप सिर्जना गरिएको छ (यो हामीले प्रकाशित गरेको सामग्रीको मात्रामा निर्भर गर्दछ), हामी लिंकको साथ नयाँ ईमेल प्राप्त गर्नेछौं सामग्री डाउनलोड गर्न।
कसरी फेसबुक खाता निस्क्रिय गर्ने
एक पटक जब हामी मुख्य फेसबुक पृष्ठमा हुन्छौं, हामी कन्फिगरेसन विकल्पहरूमा पहुँच गर्दछौं हाम्रो छविमा क्लिक गरेर र त्यसपछि सेटअप र गोपनीयता - सेटिंग.
बाँया स्तम्भमा, क्लिक गर्नुहोस् तपाईंको फेसबुक जानकारी। अब हामी दायाँ स्तम्भमा जान्छौं र क्लिक गर्नुहोस् निष्क्रियता र हटाउने.
अर्को पृष्ठमा, क्लिक गर्नुहोस् खाता निष्क्रिय गर्नुहोस् र हामी अनुरूप छौँ खाता निष्क्रियतामा जानुहोस्.
अर्को, हामीले पुष्टि गर्नुपर्नेछ कि हामी खाताको वैध मालिकहरू हौं हाम्रो पासवर्ड प्रविष्टि गर्दै। यो मध्यवर्ती प्रक्रिया को लागी कुनै पनि जोसँग ब्राउजरमा खोलिएको फेसबुक खाता पहुँच गरीएको छ वा खाता निष्क्रिय वा हटाउनबाट रोक्न।
अन्तमा हामीले अस्थायी रूपमा खाता निष्क्रिय गर्न चाहेको कारण हामीले निर्दिष्ट गर्नुपर्दछ (हामी यस चरणलाई छोड्न सक्दैनौं)। हामीसँग कारणहरूको अधिक विवरण थप्न विकल्प पनि छन् जसले हामीलाई खाता निस्क्रिय बनायो।
यदि हामीले खाता निस्क्रिय गर्नुभयो भने पनि, हाम्रा साथीहरू र परिवारले हामीलाई घटनाहरूमा आमन्त्रित गर्न सक्दछन्, हामीलाई फोटोहरूमा ट्याग गर्न र समूहहरूमा आमन्त्रित गर्न सक्दछन्। खाता निस्क्रिय बनाएर, यी सूचनाहरू प्राप्त गर्न जारी गर्ने एक मात्र तरिका ईमेल खाता मार्फत हो। यदि त्यस्तो हो भने हामीले बाकस जाँच गर्नु हुँदैन फेसबुकबाट ईमेलहरू प्राप्त गर्न रोक्नुहोस्.
यदि हामी फेसबुक मेसेजिंग प्लेटफर्म, मेसेन्जर प्रयोग गर्न जारी राख्न चाहान्छौं भने हामीले बाकसमा चिह्न लगाउनु पर्छ मेसेन्जर प्रयोग गरिरहनुहोस्। प्रोफाइल तस्बिर उस्तै रहनेछ जुन हामीले खाता निष्क्रिय गर्ने समयमा प्रयोग गर्यौं।
अन्तमा हामी क्लिक गर्दछौं निष्क्रिय गर्नुहोस्। अन्तिम सन्देश प्रदर्शित हुनेछ जसमा हामी पढ्न सक्छौं:
तपाईंको खाता निष्क्रिय गर्नाले तपाईंको प्रोफाइल निष्क्रिय हुनेछ र तपाईं फेसबुक मा साझा गरेको धेरै सामग्रीबाट तपाईंको नाम र फोटो हटाउनेछ। केही व्यक्ति अझै निश्चित जानकारी हेर्न सक्षम हुनेछ, जस्तै तपाईंको साथीहरूको सूचीमा तपाईंको नाम र तपाईंले पठाउनु भएको सन्देशहरू।
खाताको निस्क्रियताका साथ अगाडि बढ्न, क्लिक गर्नुहोस् अब निष्क्रिय गर्नुहोस्.
एक निष्क्रिय फेसबुक खाता कसरी पुन: सक्रिय गर्ने
हाम्रो फेसबुक खाता पुन: सक्रिय गर्ने प्रक्रिया प्लेटफर्ममा हाम्रो खाता डेटा पुन: प्रविष्ट गर्ने जत्तिकै सरल छ। त्यो समयमा, फेसबुकले हामीलाई आमन्त्रित गर्ने सन्देश देखाउनेछ खाता पुनः सक्रिय गर्नुहोस् कि हामी पहिले निष्क्रिय गरिएको थियो।
कसरी फेसबुक खाता मेटाउने
अर्को पृष्ठमा, क्लिक गर्नुहोस् हटाउनुहोस् र हामी अनुरूप छौँ खाता मेटाउने मा जानुहोस्.
यहाँ दुई विकल्पहरू छन्:
मेसेन्जर प्रयोग जारी राख्न खाता निष्क्रिय गर्नुहोस् (प्रक्रिया जुन हामीले अघिल्लो भागमा व्याख्या गरेका छौं)
तपाईंको जानकारी डाउनलोड गर्नुहोस् (हामीले यो लेखको पहिलो खण्डमा कसरी गर्ने भनेर वर्णन गरेका छौं)।
यदि हामीले पहिले नै यी दुई विकल्पहरूलाई ध्यानमा राखेका छौं भने, मेट्नुहोस् खातामा क्लिक गर्नुहोस्।
अर्को, हामीले यो पुष्टि गर्नै पर्छ कि हामी यस खाताको वैध मालिकहरू हौं हाम्रो पासवर्ड प्रविष्टि गर्दै र निम्न सन्देश प्रदर्शित हुनेछ:
तपाईं स्थायी रूपमा आफ्नो खाता मेटाउन लाग्नु भएको छ। यदि तपाईंसँग त्यसो गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, «खाता मेटाउनुहोस् on मा क्लिक गर्नुहोस्। अबदेखि तपाईसँग reac० दिन छ यसलाई पुन: सक्रिय गर्न र मेटाउन रद्द गर्नुहोस्। यो -०-दिन अवधिको पछि, हटाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ र तपाईंले थप गर्नुभएको कुनै पनि प्रकारको सामग्री वा जानकारी पुनः प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
यस क्षणबाट, हामीसँग days० दिन छ हामीले हटाएको खाता पुन: प्राप्ति गर्न।
मेटाईएको फेसबुक खाता कसरी पुन: प्राप्ति गर्ने
त्यस क्षणबाट हामी यो पुष्टि गर्छौं कि हामी फेसबुक खाता मेटाउन चाहन्छौं, हामीसँग यसलाई फिर्ता लिनको लागि days० दिनहरू छन्। त्यसो गर्नका लागि हामीले भर्खरको ईमेल खाता र पासवर्ड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ।
बाँकी दिनहरू तब देखिनेछ जब सम्म खाता पूर्ण रूपले मेटिदैन। खाता हटाउन रद्द गर्न, क्लिक गर्नुहोस् मेटाउने कार्य रद्द गर्नुहोस्.
यदि 30० दिन भन्दा बढी बितिसकेको छ भने, तपाईं आफ्नो फेसबुक खाता रिकभर गर्न सक्षम हुनुहुने छैन र यदि तपाइँ प्लेटफर्ममा फिर्ता जान चाहानुहुन्छ भने तपाइँ स्क्र्याचबाट सुरु गर्नुपर्नेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » सामाजिक सञ्जालहरू » कसरी एउटा फेसबुक खाता मेटाउने
Android मा प्यारेन्टल नियन्त्रण कसरी कन्फिगर गर्ने